နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: ခုခံအားကျရောဂါ ဆေးတွေ (၁)
ခုခံအားကျရောဂါ ဆေးတွေ (၁)
AIDS Education and Training Centers National Resource Center 2006 October
- Nucleos(t)ide Reverse Transcriptase Inhibitors ဆေးအုပ်စု
- Single Tablet Regimen
- Fusion Inhibitor
Nucleos(t)ide Reverse Transcriptase Inhibitors ဆေးအုပ်စု
1. Abacavir (Ziagen® or ABC) 300 mg
1 x 300mg tablet2timesaday တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
2 x 300mg tablets once daily တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
2. Didanosine (Videx ® EC or ddI) 250mg and 400mg
1 x 400mg capsule once daily တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
• Reduce dose for weight < 60 Kg ကိုယ်အလေးချိန် ၆ဝ ကီလိုအောက်ဆိုရင် ဆေးလျှော့ရမယ်။
• Take on an empty stomach with water အစာမရှိချိန်မှာ ရေနဲ့သောက်ပါ။
Note: When combined with Tenofovir, reduce Didanosine to 250mg once daily; may be taken with food မှတ်ချက်။ Tenofovir နဲ့ တွဲသောက်ရရင် Didanosine 250mg ကိုသာ တနေ့ ၁ ကြိမ်သောက်ပါ။
Peripheral neuropathy, Pancreatitis, Nausea, Diarrhea* အာရုံကြောထိခိုက်၊ သရက်ရွက်ရောင်၊ ပျို့၊ ဝမ်းပျက်။
3. Emtricitabine (Emtriva ® or FTC) 200mg
1 x 200mg capsule once daily တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
• May be taken with or without food အစာနဲ့ နီးနီး ဝေးဝေး သောက်နိုင်တယ်။
Headaches, Fatigue, Nausea* ခေါင်းကိုက်၊ အားယုတ်၊ ပျို့။
4. Lamivudine (Epivir ® or 3TC) 150mg and 300mg
1 x 150mg tablet2timesaday တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
1 x 300 mg tablet once daily တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
Headaches, Fatigue, Nausea* ခေါင်းကိုက်၊ အားယုတ်၊ ပျို့၊
5. Stavudine (Zerit ® or d4T) 30mg and 40mg
1 x 40mg capsule2timesaday တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
1 x 30mg capsule2timesaday တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
Peripheral neuropathy, Altered liver function* အာရုံကြောထိခိုက်၊ အသဲအလုပ်ပြောင်းလဲ၊
6. Tenofovir DF (Viread ® or TDF) 300mg
1 x 300mg tablet once daily တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
Renal insufficiency (rare), Nausea, Upset stomach ကျောက်ကပ်ထိခိုက် (ရှားပါး)၊ ပျို့၊ အစာမကျေ၊
7. Zidovudine (Retrovir ® or AZT) 100mg and 300mg
Anemia, Neutropenia, Headaches, Nausea, Body aches, Insomnia* သွေးအားနည်း၊ သွေးဖြူဥနည်း၊ ခေါင်းကိုက်၊ ပျို့၊ ကိုက်ခဲ၊ အိပ်မပျော်၊
8. ABC/3TC (Epzicom®)
ABC 600mg / 3TC 300mg
1 tablet once daily တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
Hypersensitivity reaction (as above) ဆေးမတည့်ခြင်း၊
DO NOT RECHALLENGE! အဲလိုဖြစ်ရင် ဆေးဆက်မသောက်ပါနဲ့။
9. ABC/3TC/AZT (Trizivir ®)
ABC 300mg/AZT 300mg/3TC 150mg
1 tablet2timesaday တခါသောက် ၁ ပြား တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
Refer to Adverse Effects listed for individual agents**
DO NOT RECHALLENGE! ဆေးမတည့်တာဖြစ်ရင် ဆေးဆက်မသောက်ပါနဲ့၊
10. AZT/3TC (Combivir ®)
AZT 300mg & 3TC 150mg
Refer to Adverse
Effects listed for individual agents*
11. TDF/FTC (Truvada ®)
TDF 300mg / FTC 200mg
1 tablet once daily တခါသောက် ၁ ပြား တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
Refer to Adverse Effects listed for individual agents*
1. TDF/FTC/EFV (Atripla TM)
TDF 300mg/FTC 200mg/EFV 600mg
1 tablet once daily at bedtime တခါသောက် ၁ ပြား တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ညအချိန်သောက်ပါ။
• Empty stomach recommended အစာမရှိချိန်မှာ သောက်ပါ။
1. Delavirdine (Rescriptor ® or DLV)
2 x 200mg tablets3timesaday တခါသောက် ၂ ပြား၊ တနေ့ ၃ ကြိမ်၊
• Do not take with antacids အက်စစ်ဓါတ်ပျယ်ဆေး နဲ့ တွဲမသောက်ပါနဲ့၊
Rash, Headache အနီပြင်ထွက်၊ ခေါင်းကိုက်၊
Altered liver function အသဲအလုပ်ပြောင်းလဲ၊
2. Efavirenz (Sustiva® or EFV)
200mg and 600mg
1 x 600mg tablet once daily at bedtime 600mg တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ တကြိမ်၊ ညအချိန်သောက်ပါ၊
3 x 200mg capsules once daily at bedtime 200mg တခါသောက် ၃ ပြား၊ တနေ့ တကြိမ်၊ ညအချိန်သောက်ပါ၊
• Empty stomach recommended (avoid taking with high fat meals)
Rash, Altered liver function, Dizziness, Insomnia, Impaired concentration, Drowsiness, Abnormal dreams
3. Nevirapine (Viramune® or NVP)
1 x 200mg tablet2timesaday (start with 200mg tablet once daily x 14 days) တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်အရင်သောက်ပြီးနောက်မှာ တနေ့ ၂ ကြိမ်ဆက်သောက်ပါ၊
Rash, Headache, Altered liver function အနီပြင်ထွက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ အသဲအလုပ်ပြောင်းလဲ၊
1. Enfuvirtide (T-20 or Fuzeon ®)
Injection (108mg vial diluted with 1.1 mL sterile water) အရေပြားအောက်ထိုးဆေး၊
Administered dose: 90mg/mL subcutaneously (SQ)2timesaday တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
• Also available as biojector device ဆေးထိုးလွယ်ကူစေရန်ကရိယာပါပြီး၊
• Store at controlled room temperature အခန်းတွင်းအပူချိန်မှာသာထားသိုပါ၊
Injection site reaction: Pain/discomfort, Induration, Erythema, Nodule ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာ နာ၊ အနေရခက်၊ နီရဲ၊ ဖူးရောင်နိုင်၊
Other: Diarrhea, Nausea, Vomiting, Fatigue, Insomnia ဝမ်းပျက်၊ ပျို့၊ အန်၊ အားယုတ်၊ အိပ်မရဖြစ်၊
1. Atazanavir (Reyataz ® or ATV)
2 x 200mg capsules once daily 200mg တခါသောက် ၂ တောင့်၊ တနေ့ ၁ ကြိမ်သောက် ဆေးတောင့်၊
2 x 150mg capsules once daily with Ritonavir 100mg capsule once daily 150mg တခါသောက် ၂ တောင့်ကို Ritonavir 100mg နဲ့တွဲပြီး တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
Note: Use Ritonavir boosted dose when combined with Efavirenz, Nevirapine, or Tenofovir ဆေးတွေနဲ့ရောသောက်ရရင် Ritonavir ကို ထပ်သောက်ခိုင်းမည်၊
• Take withalight meal အစာနဲနဲလေးနဲ့တွဲသောက်ပါ၊
• Do not take with antacids or proton pump inhibitors အက်စစ်ဓါတ်ပျယ်ဆေး နဲ့ တွဲမသောက်ပါနဲ့၊
Diarrhea, Nausea, Abdominal Discomfort, Increased bilirubin (jaundice)** ဝမ်းပျက်၊ ပျို့၊ ဗိုက်အောင့်၊ အသားဝါ၊
2. Darunavir (Prezista TM or DRV)
300mg Always use with Ritonavir ဆေးနဲ့သာတွဲသောက်ပါ။
2 x 300mg tablets2timesaday with တခါသောက် ၂ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
Ritonavir 1 x 100mg capsule2timesaday တခါသောက် ၁ တောင့်၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
• Take with food အစာနဲ့တွဲသောက်ပါ၊
Diarrhea, Nausea, Headache, Cold Symptoms** ## ဝမ်းပျက်၊ ပျို့၊ ခေါင်းကိုက်၊ အအေးမိသလိုခံစား၊
3. Fosamprenavir (Lexiva ® or f-APV)
PI-naïve patients (PI ဆေးမသောက်ရသူ)
2 x 700mg tablets2timesaday တခါသောက် ၂ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
2 x 700mg tablets once daily with Ritonavir2x 100mg capsules once daily (Fosamprenavir ကို တခါသောက် ၂ ပြား၊ တနေ့ ၁ ကြိမ် + Ritonavir တခါသောက် ၂ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊)
Note: Use Ritonavir 300mg once daily when combined with Efavirenz or Nevirapine မှတ်ချက်။ Efavirenz ဒါမှမဟုတ် Nevirapine နဲ့တွဲသောက်ရင် Ritonavir 300mg ကို တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
1 x 700mg tablet2timesaday with Ritonavir 1 x 100mg capsule2timesaday (Fosamprenavir တနေ့ ၂ ကြိမ် + Ritonavir တနေ့ ၂ ကြိမ်)
PI-experienced patients: (PI ဆေး သောက်ဘူးသူ)
Note: Use Ritonavir boosted dose when combined with Efavirenz or Nevirapine မှတ်တချက်။ Efavirenz ဒါမှမဟုတ် Nevirapine နဲ့တွဲရရင် Ritonavir ကိုထပ်သောက်ခိုင်းမည်)
Diarrhea, Nausea, Headache, Altered liver function, Rash** ## ဝမ်းပျက်၊ ပျို့၊ ခေါင်းကိုက်၊ အသဲအလုပ်ပြောင်းလဲ၊
4. Indinavir (Crixivan® or IDV)
2 x 400mg capsules2timesaday with Ritonavir 100-200mg capsule(s)2timesaday တခါသောက် ၂ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ် + Ritonavir တခါသောက် ၂ တောင့်၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်)
• Take with food အစာနဲ့တွဲသောက်ပါ။
• Drink at least 1.5 liters of fluid daily တနေ့ ရေ တလီထာခွဲသောက်ပါ။
Nausea, Vomiting, Kidney stones, Heartburn, Increased bilirubin (jaundice)** ပျို့၊ အန်၊ ကျောက်ကပ်ကျောက်၊ ရင်ပူ၊ အသားဝါ။
5. Lopinavir/Ritonavir (Kaletra ® or LPVr)
Lopinavir 200mg / Ritonavir 50mg
2 tablets2timesaday တခါသောက် ၂ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
4 tablets once daily တခါသောက် ၄ ပြား၊ တနေ့ ၁ ကြိမ်၊
PI-experienced patients (PI ဆေး သောက်ဘူးသူ)
Once daily not recommended တနေ့ ၁ ခါသောက်မလုပ်ရ။
Note: Use3tablets2timesaday when used with Nevirapine or Efavirenz မှတ်ချက်။ Nevirapine ဒါမှမဟုတ် Efavirenz နဲ့တွဲရရင် တခါသောက် ၃ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
Diarrhea, Nausea, Asthenia (lack of strength), Headache, Altered liver function** ဝမ်းပျက်၊ ပျို့၊ အားယုတ်၊ ခေါင်းကိုက်၊ အသဲအလုပ်ပြောင်းလဲ၊
6. Nelfinavir (Viracept ® or NFV)
250mg and 625mg
2 x 625mg tablets2timesaday တခါသောက် ၂ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
5 x 250mg tablets2timesaday တခါသောက် ၅ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
3 x 250mg tablets3timesaday တခါသောက် ၃ ပြား၊ တနေ့ ၃ ကြိမ်၊
Diarrhea, Nausea, Vomiting, Abdominal Pain** ဝမ်းပျက်၊ ပျို့၊ အန်၊ ဗိုက်နာ၊
7. Ritonavir (Norvir ® or RTV)
Ritonavir is primarily used in low doses to boost drug levels of other protease inhibitors
Nausea, Vomiting, Numbness around the mouth, Altered taste, Diarrhea, Abdominal pain, Altered liver function**
8. Saquinavir (Invirase ® or SQV-HGC)
500 mg 200mg Tablet Hard Gel Capsule
Always use with Ritonavir အမြဲ Ritonavir နဲ့တွဲသောက်ပါ၊
2 x 500mg tablets2timesaday with Ritonavir 100mg capsule2timesaday (Saquinavir + Ritonavir တခါသောက် ၂ ပြားစီ၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်)
5 x 200mg capsules2timesaday with Ritonavir 100mg capsule2timesaday (Saquinavir တခါသောက် ၅ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ် + Ritonavir တခါသောက် ၂ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်)
Diarrhea, Nausea, Headache, Altered liver function** ဝမ်းပျက်၊ ပျို့၊ ခေါင်းကိုက်၊ အသဲအလုပ်ပြောင်းလဲ၊
9. Tipranavir (Aptivus ® or TPV)
Always use with Ritonavir အမြဲ Ritonavir နဲ့တွဲသောက်ပါ။
2 x 250mg capsules2timesaday with Ritonavir2x 100mg capsules2timesaday တခါသောက် ၂ ပြားစီ၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊
• Keep refrigerated ရေခဲသေတာထဲမှာထားသိုပါ။
Diarrhea, Nausea, Vomiting, Stomach Cramps, Rash, Hyperlipidemia, Intracranial Hemorrhage** ## ဝမ်းပျက်၊ ပျို့၊ အန်၊ ဗိုက်နာ၊ အနီပြင်ထွက်၊ အဆီများ၊ ခေါင်းထဲသွေးယို၊
* Class Adverse Reaction: lactic acidosis with hepatic steatosis (rare, but potentially life threatening reaction with use of NRTIs) အသဲကိုထိခိုက်ခြင်း၊
** Class Adverse Reactions: Hepatotoxicity, Insulin Resistance /Diabetes Mellitus, Fat maldistribution, Osteonecrosis, Increased bleeding episodes in hemophiliac patients အသဲကိုအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ ဆီးချို၊ အဆီလုပ်ငန်းထိခိုက်၊ အရိုးထိခိုက်၊ သွေးရောဂါရှိသူမှာ သွေးယို၊
## Caution in patients with known sulfonamide allergy (ဆာလ်ဖါ) နဲ့ မတည့်သူ မသောက်ရ၊
Posted by Hajee Than Hla Oo at 4:47 PM